Sawirro: 16 Qof Filasdiiniyiin Ah Oo Ku Dhintay Toogasho Ay Geysteen Ciidamada Yahuudda.
Dhageyso: Xalqada 4aad ee Barnaamijka Dhulkii Awoowayaasheen Yaa soo dhicin doona?.
Cudur aan la aqoon oo soo ritay mid kamida Mas'uuliyiinta dowladda Sacuudiga.
Dibad baxyo rabshado wata oo dib uga billaawday dalka Ciraaq.
Saturday March 31, 2018 - 10:34:29 in Wararka by Super Admin
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay toogasho ay ciidamada Yahuudda Sahyuuniyadda ka geysteen deegaanno katirsan Marinka Ghaza ee dhulalka Filasdiin.
Wararka ka imaanaya Falasdiin ayaa sheegaya in ugu yaraan 16 qof shacab ah lagu toogtay inta u dhaxaysa Ghaza iyo dhulalka laheysto, dadka lalaayay ayaa dhigayay dibad baxyo ballaaran oo loogasoo horjeedo qabsashada Yahuudda ee dhulalka dhaca daanta galbeed illaa wabiga Urdun.
Goob Joogayaal ayaa sheegaya in ciidamo shiishyahanno Yahuud ah ay madaxa ka toogteen dadka shacabka ah oo xilligaas isku dayay in ay ka tallaabaan Siligga kala qeybiga Ghaza iyo deegaannada kale.
Malaayiin qof Filasdiiniyiin ah ayaa shalay salaaddii Jimcaha kadibna waxay ku dhaqaaqeen dibad baxyo ballaaran oo ay ugu magac dareen "Maalinta dhulka" , waxayna dibad baxyadaas ka caraysiiyeen maamulka Yahuudda.
Ismaaciil Haniya oo ah madaxa xafiiska Siyaasadda Ururka Xamaas ayaa kalimad uu jeediyay ugu baaqay shacabka Filasdiin iyo kooxaha muqaawamada ugu baaqay in ay u aargudaan dadkii lagu xasuuqay Jiidda Ghaza.
Dagaal Khasaara badan dhaliyay oo Muqdisho ku dhaxmaray ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka.
Ciidamada dowladda oo qof Shacab ah ku dilay isgoyska Ex.Control Afgooye.
Ciidamada Al Shabaab oo gudaha ugalay magaalada Marka.
Daawo Sawirro: Beesha Eelaay oo Suldaan guud ku dooratay gobolka Bay.
Sawirro: Diyaarad Drone ah oo ku dhacday Tooratooroow iyo Al Shabaab oo gacanta ku dhigay.
80 katirsan ciidamada dowladda Yemen oo ku dhintay Weerar gantaal loo adeegsaday.
Sawirro: Al-Shabaab Oo Sheegatay Mas'uuliyada Qarax Xoogan Oo Shaqaale Turki Ah Lagula Eegtay Duleedka Afgooye.
4 katirsan ciidamada Uganda oo ku dhintay Weerar ka dhacay duleedka degmada Qoryooleey.
Faah Faahin: Askar iyo saraakiil ciidamada dowladda looga dilay dagaalkii Xaaji Cali.
Ciidamada Dowladda oo Nabadoon caan ah ku dilay degmada Wanllaweyn.
Sawirro+Warbixinno: Horumar dhan walba ah oo ka jira magaalada Bu'aale ee Jubbada Dhexe.
26/12/2019 - 12:46:44